We Fight We Win. -- " More than Media ": ပြည်မြို့ တွင်လျှပ်စစ်မီးပုံမှန်ရရှိရေးငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူလူထုနှင့်လုံထိမ်းတပ်ဖွဲ့ တို့ သဘောထားတင်းမာနေကြပြီးရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခံရသူပြည်သူများလည်းရှိနေသည်ဟုကြားရပါသည်။မေလ ၂၄ ရက်၊၂၀၁၂
ပြည်မြို့ တွင်လျှပ်စစ်မီးပုံမှန်ရရှိရေးငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူလူထုနှင့်လုံထိမ်းတပ်ဖွဲ့ တို့ သဘောထားတင်းမာနေကြပြီးရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခံရသူပြည်သူများလည်းရှိနေသည်ဟုကြားရပါသည်။မေလ ၂၄ ရက်၊၂၀၁၂
လုံထိန်းတွေ ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတယ်ဆိုရင် အခုတင်တားတဲ့ပုံတွေလိုမျိုး မြင်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ပြေးလွား နေတဲ့ပုံတွေဘဲမြင်ရမယ်။
5)Construction of Road/lane in
6)City/Town Fire Fighting System (eg. Providing Water Pillar Hydrant and under ground water pipe line in each and every of main road)
7)Rubbish/Debris Cleaning System & Facilty. (eg. Municipal Office/Group/Council : (a)Arrange and carry out cleaning Rubbish at Main Road, Market ,Drain & Plublic Hall …etc (b) Provide
The living standard of the country is BADLY going down deeper and deeper with great acceleration and momentum due to the IMPACT OF 50 YEARS MISTAKES OF WRONG POLITICAL SYSTEM and WRONG ECONOMIC SYSTEM SET UP BY JUNTA,NE WIN and FOLLOWED UP BY HIS NEW GENERATION OF MILITARY GANGSTERS
DEFINITELY the 50 YEAR HUGE DEBT CAN NOT BE RECOVERED BACK WITHIN A FEW YEARS.